Dab khasaaro geystay oo ka kacay Guryo ku yaalla Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dab khasaaro geystay oo ka kacay Guryo ku yaalla Muqdisho
Dab xoogan oo geystay khasaaro hantiyadeed ayaa Maanta ka kacay Guryo ku yaalla xaafad ka tirsan degmada Warta-nabadda ee Gobolka Banaadir, waxaana kasoo baxaya faah faahino dheeraad ah.
Goobjoogayaal la hadlay warbaahinta gudaha ayaa u sheegay in dabkaas markii horey uu ka kacay Guri ku yaalla meel ku dhow Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya, kadibna uu kusii faafay Guryo kale oo ku dheganaa.
Dabka oo socday muddo ku dhow saacad ayaa waxaa markii dambe goobta gaaray gaadiidka demiska maamulka Gobolka Banaadir, iyagoona sameeyay dadaalo kala duwan oo lagu guuleystay in la demiyo dabkaas.
Sidoo kale dabka ayaa waxaa ka dhashay khasaaro hantiyadeed, isla markaana waxaa uu baabi’iyay laba Guri oo ay deganaayeen 5 qoys, iyadoona labada Guri ee baaba’ay ay ka koob-naayeen 7 qol, kuwaasi oo gabi ahaan gubtay.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maalmihii dambe kusoo badanayay dababka kacaya, waxaana xusid mudan in habeeno kahor Suuqa weyn ee degmada Wadajir uu inta gubtay , kadib markii uu ka kacay dab xoogan oo saacado socday.
SAWIRRO:-Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo gaaray Garoowe iyo Ujeedkiisa
SAWIRRO:-Guddoomiye Cabdi Xaashi oo lagu soo dhaweeyay Garoowe